Indlela yokungena kwi-Skateboard kwi-Skatepark okanye kwiRamp
Ukufunda ukwehla kwi- skatepark okanye kwiphampo enye yezinto ezinzima kunokuba uzibonele kwi-skateboarding. Akunjalo kuba kuthatha ubuchule obuninzi, kodwa kuba kuthatha ininzi yokuthanda kunye nokuthwala. Nangona kunjalo, ukuba uya kufunda ukukhwela kwi-skatepark okanye kwi-ramp, kuyakufuneka ufunde ukukhululeka ukuwela kwi- skateboard yakho.
Inyathelo 1 - Ukusetha
UPierre-Luc Gagnon Uweleka eSlam City Jam. Umfoto: uJamie O'Clock
Yintoni eLahlayo? - Ukungena kwi-skateboard yindlela abadlali abaninzi be-skate boarders abangena ngayo izitya, i-skateparks, kunye neendlela zendalo. Kwinqanaba eliphezulu lee-skateboard ramps kunye kunye nemida yeebhotile kukho umlomo ophakanyisiweyo obizwa ngokuthi "ukujamelana". Ukukwazi ukulahla kuvumela i-skateboarders ukuba ihambe ukusuka ekupheleni kwendlela yokubambisana, ngokukhawuleza kwi-skateboarding ngexesha elininzi kwisantya.
Ukuba unobutsha olutsha kwi-skateboarding, kufuneka uqale ukhululekile kunye ne-skateboarding ecaleni kwepaki, kunye nomhlaba, nangaphezulu kweenguqulelo. Awudingi ukuba wazi naziphi na iinkcazo ngaphambi kokuba ufunde indlela yokulahla kwi-skateboard, kodwa uya kufuneka ukwazi ukukhwela i-skateboard yakho. Oku kungenxa yokuba xa usweleka, uya kukhwela ngokukhawuleza, kwaye uya kufuneka uzive ukhululekile kunye nokukhwela kunye nokukhokela i-skateboard yakho. Ukuba unobutsha olutsha kwi-skateboarding, funda nje Ukuqala nge-Skateboarding kwaye uthathe ixesha lokuba ukhululeke nge-skateboard yakho.
Qinisekisa ukuba ufunda yonke le miyalelo phambi kokuba uqhube kwi-skatepark ukuze ungene kuyo. Emva kokuba uyazazi, hamba!
Inyathelo 2 - Khangela iRamp
Xa ufika kuqala kwi-skatepark, zama i-skateboarding ngaphantsi kwe-ramp. Gxotha ipaki ngokukhawuleza, ukuziva ukutshintshwa (irampu). Kwakhona, qiniseka ukuba ugqoke isigqoko phambi kokuba uzame oku. Ukuxhuma xa uhla eyokudala indlela yokukhangela ibhokisi lakho lobuchopho emhlabathini, kwaye ekugqibeleni ungalokothi uphinde uphumelele. Gqoka isigqoko.
Ukuba awunasetyenziselwa ukuqhubela phambili kwizinto eziphathekayo kule ndawo okanye epakini eyenziwa, le nyathelo ibaluleke kakhulu. Uvakalelo lwekhonkrit, ukhuni kunye nentsimbi zonke zihluke kakhulu xa i-skateboarding. Amagumbi athile e-skateboard aya kusebenza kangcono epakini okanye kwezinye iinguqu kunabanye - ukuba uceba ukwenza i-skateboard ngokubanzi kwi-skatepark okanye kwiindawo zokurhweba, ungase ufune ukufumana iivili zepomfom. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukukhangela ipaki kunye nesitalato, into enjalo. Ukufunda luhlobo luni lomhlaba ofuna ukukhwela ngalo luya kukunceda ukhethe isigqibo malunga nokusekwa kwebhodi ye-skateboard.
Emva kokuba unento efanelekileyo yokuziva oko kufana nokwenza i-skateboard ezantsi ngaphantsi kwepampu okanye ipaki, kunye nento encinci yento uguqulelo oluvakalelwa ngayo, intloko phezulu kwinqampu.
Inyathelo 3 - Hlela umgca
Umfoto: uMichael Andrus
Xa uhleli phezulu kwiphondo, jonga apho oku kuhamba khona. Ngaba iphela kwindawo enkulu yeplati? Okanye ngaba uya ngqo kwenye indawo? Cinga malunga nalapho ufuna ukuhamba khona, xa ufika kwizantsi le rampu. Ngethuba lokuqala lokungena kulo, ndincoma ukuba ndifumane indawo eneplatile enkulu phantsi kwempambu, kodwa akudingeki ukuba ukhathazeke kakhulu ngale nto. Eyona nto, ufuna ukuqonda oko uza kuba yi-skateboard towards, emva kokuba ufike ngasezantsi.
Ufuna ukwazi ezinye i-skateboarders! Musa ukugxininisa kakhulu ukuba uvimbe wonke umntu kwi-skatepark, kwaye unamathele kumntu xa uphonsa kwi skateboard yakho.
Inyathelo 4 - Hlela umsila wakho
Beka umsila we-skateboard yakho ekuxhaseni (umgca ojikeleziweyo okanye ipayipi egijima ngaphaya komda ophezulu we-ramp, apho i-ramp kunye nesigqeba esihlangeneyo). Ufuna ukuba isondo sakho siphendukele ngaphaya komda weRamp. Gcina i-skateboard yakho apho ngeenyawo zakho, uze ubeke unyawo lwakho ngqo kumsila we-skateboard yakho.
Amasondo akho angaphambili aya kuphuma ecenga emoyeni, kwaye ibhodi yakho iya kukhishwa kancane. Inyawo lakho langaphambili lingaba phezu komhlaba ngaphaya kwakho, ngelixa ulinde ukujika kwakho kwi-skateboard yakho.
Inyathelo 5 - Beka i-Front Foot Yakho
Xa ulungele, faka inyawo lakho langaphambili phezu kwamaloli angaphambili e-skateboard yakho.
Ndiyincoma ukunqambela eli nyathelo kunye nelinye, kwaye ungabeki unyawo lwakho apho kwaye ulinde. Kodwa khangele umfanekiso ophezulu ngenjongo yokuba ufumane ingcamango yokuba kufuneka uhambe khona.
Inyathelo lesi-6 - Ukuqhawula kunye nokuxhomekeka
Xa ubeka inyawo lakho ngaphambili ebhodini, lihlahlele phantsi kunye nobunzima bakho bonke kude kubekho iivili eziphambili ezithintela kwinqanaba, kwaye uncike kuyo. Zibeke zonke kwi-ramp - awukwazi ukubamba nantoni na.
Kungesabisa ukuhlahlela phantsi kwaye uncike kwindawo evulekile. Akukho ukujika emva kokuba uqalise ukugqithisa, kwaye ndiza kuthi ubuncinane i- 80% yeengxaki zabantu abanayo xa behla ukungenzi ngokwaneleyo kule ngxenye. Umele uthembele ukuba wena kunye nebhodi yakho yebhodi yebhodi yezithuthi iya kwenza lo msebenzi. Kufuneka utyalomali ekuhlaleni i-100%. Konke okanye akukho nto. Yibophezele ekuhlaleni. Emva kokuba wenze njalo, kuya kufumana lula kwaye kulula njalo.
Nantsi imfihlo malunga ne-skateboarding - ubuchule bubaluleke kakhulu, kodwa kubaluleke ngaphezu kwekhono ukuzithemba. Konke kusekhanda lakho. Yiyo leyo eyahlula into efana ne-skateboarding evela kwezinye "ezemidlalo". Umchasi wakho onamandla kunakho. Ngoko xa ujamelana nento efana nokungena, kwaye uyakwenza , uthatha inyathelo elikhulu ekulawuleni ukuzithiba.
Kwakuyinto encinci, kodwa yinyaniso. Ingongoma ukuba uya kuzama kwaye ufunde ukuhla, uze wenze njalo. Kufana noYoda uthi, "Yenzani okanye musa, akukho nto izama." Ewe, ndaphula nje uYoda. Kodwa uyavuma - xa ufika phezulu kweso sigxina, kwaye ulungele ukungena phantsi, vele ubeke unyawo lwakho phezu kwala maphulo angaphambili, udibanise phantsi, kwaye u-LEAN IN!
Isinyathelo 7 - Hamba kude
Yiyo leyo. Ngethemba, unengcamango elungileyo apho uhamba khona emva kokuba ubethe phantsi kwetampu, ngoko-ke uphume! Uya kuba nejubane, ngoko-ke uhlale ukhululekile, amadolo aguqile, kwaye uhambe nje.
Ukuphakama kwiphondo okanye utshintsho oye wagibela phantsi, ngokukhawuleza kufuneka uhambe. Ukulahla njengalokhu kungagqibelela ukufumana isantya esaneleyo ukuhamba ngepaki, okanye ukukhwela enye irampu uze wenze inkohliso. Konke kufikelela kuwe.
Isinyathelo 8 - Inkxalabo
- Andiyena mfana omkhulu wokuzibophelela kubudlelwane, kodwa kubaluleke kakhulu. Ubunzima bobukhulu beengcingo zobuncwane xa ufunda ukuwa phantsi akuyikuqhubela phambili inyawo langaphambili ngokukhawuleza ngokwaneleyo. Umzuzu obeka ubungakanani bakho ubunzima, uya kuhlahlela i-ramp. Oko kuthetha ukuba ude ufike phambi kwamavili angaphambili, uya kugqithisa kuphela kwivili ezimbini. Oku kunokukwenza ukuba uhlehlise emuva kwaye uhambe ngokulula.
Yilapho uthabatha inyawo elinye kwibhodi kwaye uzibambe. Xa ndifunda ukufunda, ndihlala ndikhupha iinyawo zam emanzini kwangoko ndize ndizenzele isigxina endleleni. Kwakuyinkathazo ebomileyo. Isitshixo sasikholosa kwaye sinokuzithemba. Kwakuncedisa ukuba ndiqhube xa kungekho mntu wandijonga kum.
I-Eteocles kunye nePolynices: Abazalwana abaqalekisiwe kunye noonyana baka-Oedipus
I-Nucleic Acids - Ulwakhiwo kunye neMisebenzi
I-Theory Mobilization Theory
Iimfazwe zeMfazwe eziza kudala kwiiNewaters kufuphi nawe